Kaspresky 8 (2009) Patch — MYSTERY ZILLION
Kaspresky 8 (2009) Patch
:67: Kaspersky 8 (ခေါ်) Kaspersky 2009 အသုံးပြုနေပြီး Black List ဖြစ်၍စိတ်ညစ်နေသူများ စမ်သပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော့တွင် Kaspersky 8 မရှိ၍ မစမ်းရသေးသည်ကို ခွင့်လွတ်ပါ။ :77:
သူက offline update မရဘူးမဟုတ်လား... ဒါဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေသေးဘူးဗျ... Offline update ရရင်တော့ ပြောင်းသုံးတော့မယ်..
သူက offline update မရဘူးမဟုတ်လား... ဒါဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေသေးဘူးဗျ... Offline update ရရင်တော့ ပြောင်းသုံးတော့မယ်.. :1:
ဒါဆို ကိုစေတန် အခုဘာသုံးလဲဟင်.. ကက်စပါ 7.0 ဆိုရင် ကီးဂျန်လာတောင်းမလို့... blacklist ချည်းဘဲဖြစ်နေတော့ စိတ်ညစ်နေပြီ.. ရှိရင်ပြောပါနော်.. လာယူမယ်..
စေတန်ရေ kaspersky 8.0 က offline update တော့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမယ့်စက်မှာ kaspersky 8.0 ရှိမှရတာ။ အသေးစိတ်ကို MZ မန်ဘာတစ်ယောက်တင်ဖူးတယ် ရှာကြည့်လိုက်ပေါ့။
ဒါဆို ကိုစေတန် အခုဘာသုံးလဲဟင်.. ကက်စပါ 7.0 ဆိုရင် ကီးဂျန်လာတောင်းမလို့... blacklist ချည်းဘဲဖြစ်နေတော့ စိတ်ညစ်နေပြီ.. ရှိရင်ပြောပါနော်.. လာယူမယ်.. :d
ကိုကိုဝင်းရေ ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတယ်ဗျ။ စေတန်ဆီမှာလဲရှိမှာပါ။ ပြီးတော့ MZ မှာ starlay တင်ပေးထားတာလဲရှိပါတယ်။
kaspersky 8 can update wthout internet connection accoding to their build number. But it will take for long time becouse the complete database size is about 80Mb (for my experience it takes for 3hours for the first time and if you cancel on halfway you have to start from begening).
You can see detail instructions here http://support.kaspersky.com/kis2009/updater?qid=193239196